Midika zava-dehibe, hoy izy, ilay tenin’ity filoham-pirenena ity hoe “Etazonia ho an’ny Amerikanina”. Midika izany fa tsy misy harem-pirenena azo avela ho gaboraraka any. Tokony ho tonga saina koa isika, raha ny fanehoan-keviny, ka mba hametraka fa “Madagasikara ho an’ny Malagasy”. Izany hoe, tsy omena ny vahiny toy izao mitranga any Soamahamanina sy ny maro hafa izao ny tany. Antso avo ho an’ny mpitondra, indrindra ho an’ny vahoaka Malagasy, hoy ny fanazavany, ka anjarantsika rehetra no mandray ny andraikitra tandrify azy avy.